အချစ်​မူးတဲ့ည (၀တ္ထုတို အဖွဲ့) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အချစ်​မူးတဲ့ည (၀တ္ထုတို အဖွဲ့)
အချစ်​မူးတဲ့ည (၀တ္ထုတို အဖွဲ့)
Posted by naywoon ni on Sep 18, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary |9comments
အချစ်​မူးည ကို ကဗျာပုံစံနဲ့ တင်​ပြခဲ့ပြီးသားပါ ။ ဒါ​ပေမဲ့ ​ပေးလာတဲ့ မှတ်​ချက်​​လေး ​တွေမှာ ကဗျာကို သိပ်​မထိမိဘူးထင်​လို့ ၀တ္ထုပုံစံ နဲ့ ထိုးဇာတ်​ခင်းပြချင်​​သေးလို့ပါ ။ အဲ့ဒိ​တော့ ကဗျာ​ရေးသူဟာ ပြန်​စဉ်းစားရပါတယ်​ ။ ၀တ္ထု ပုံစံ အဲ့ ၀တ္ထု တို အဖွဲ့ မှာဘာ​တွေလိုအပ်​မလဲ ဆိုတာ ။ နိဿရည်း ဆရာ​တွေ အလိုအရ​တော့ ၀တ္ထုတိုဆိုတာ တစ်​ထိုင်​ထဲ ဖတ်​နိုင်​ရမယ်​ တဲ့ ။ အဲ့ဒါ​တော့ လက်​မခံ နိုင်​ပါဘူး ။ ဘာလိုဆို ၀တ္ထု​ရေးဆရာက အ​ရေးအဖွဲ့ ​ကောင်းရင်​ အိုင်​ကျင်း နိုင်​ရင်​ စာမျက်​နှာ​လေးငါးရာ ကို​တောင်​ တစ်​ထိုင်​ထဲဖတ်​ခဲ့ ကြဖူးတာပဲ ။ ​နောက်​ အချိန်​ကာလ ကတို​တောင်းရမယ်​တဲ့ ။ အဲ့ဒါလည်း မဖြစ်​နိုင်​ဘူးထင်​တယ်​​နော့ ။ ​ထားပါ ။​နောက်​ ဘာရှိ​သေးလဲ ။ ဘာတဲ့ ‘ အဖွင့်​ ​မှာ ဧည့်​ခန်းထဲမှာ ဆိုလား ​သေနတ်​ တစ်​လက်​ ချိတ်​ဆွဲထားတယ်​လို့ ​ဖော်​ပြမိရင်​ အဲ့သည့်​​သေနတ်​ ပစ်​​ဖောက်​ပြီးမှ ဇာတ်​လမ်းသိမ်းရမယ်​ဆိုလား ‘ အဲ့သဟာက ပိုဆိုး​သေးတယ်​ ။ ကျုပ်​တို့ဗမာပြည်​မှာက ​သေနတ်​လိုင်​စင်​ရဖို့လွယ်​တာမဟုတ်​ ဆို​တော့ကာ ဘိုးဘွားအ​မွေ အမှတ်​တစ်​ရ ချိတ်​ဆွဲထားမ်ိရင်​ အဲ့​သေနတ်​က ပစ်​လို့ရချင်​မှရမှာ​ပေါ့ ။ အပြင်​မှာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ ရုပ်​ရှင်​ထဲမှာပဲဖြစ်​ဖြစ်​​ပေါ့ ။ ဧည့်​ခန်းမှာ ​စောင်း​ကောက်​ကို အလှပြထားတာ ။ အိမ်​ရှင်​က အဲ့ ​စောင်း တီးတတ်​ချင်​မှ တီးတတ်​မှာ​ပေါ့ …. ​နော့ ။ နောက်​ ဘကုန်း ​ခြောက်​လုံး လား အဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ ညီ​အောင်​​ အားထုတ်​ကြည့်​ပါမယ်​ ။ ကိုယ်​​ရေးမဲ့ ၀တ္ထုထဲက အ​ကြောင်းအရာက ဘယ်​မှာဖြစ်​ခဲ့သလဲ ။ ဘယ်​အချိန်​ကလဲ ။ ဘယ်​သူ ​တွေပါလဲ ။ စသည်​ဖြင့်​​ပေါ့ဗျာ ။ ဒါ​ပေမဲ့ ထိုးဇာတ်​ဖြစ်​တဲ့ အတွက်​ ဖတ်​မိတဲ့သူများ ထပ်​ဖြည့်​​တွေးကြဖို့​တော့ထားခဲ့ ပါရ​စေ ။
​နေရာက မြန်​မာပြည်​တွင်းတစ်​​နေရာ ​ပေါ့ဗျာ ။ နဲနဲ ထပ်​​ပေါရရင်​ မြို့တစ်​မြို့နဲ့ အလှမ်းမ​ဝေးတဲ့ အ​ဝေး​ပြေးလမ်းမကြီးရဲ့ ​ဘေးက ခိုင်​ခန့်​မှု အသင့်​အတင့်​ရှိ​သေးတဲ့ တစ်​ထပ်​တိုက်​ပု​လေးဗျာ ။ အချိန်​က ည​နေ ​နေ၀င်​ကာစ ။ မိုးရာသီ ဖြစ်​တဲ့အတွက်​ မိုးကလဲဖွဲဖွဲ​လေ ရွာ​နေပြီး ​လေက ​တော့ တစ်​ချက်​တစ်​ချက်​နဲနဲကြမ်းချင်​တယ်​ ။ အဲ ​စော​စောက ​ပြောတဲ့ တိုက်​ပု​လေးထဲမှာ ကို​မောင်​​မောင်​​လေး တစ်​​ယောက်​ တစ်​ကိုယ်​ထဲ ဇက်​ရက်​မင်းစည်းဇိမ်​ခံ​နေတယ်​ ။ ဆက်​တီ စားပွဲ​ပေါ်မှာ ဂရင်း ရိုင်​ရယ်​ အပြာပတ်​ ပုလင်းပြား​လေးတင်​ထားတာ ခုမှနှစ်​ပက်​စာ​လောက်​ပဲ​လျော့​သေးတယ်​ ။ ဖန်​ခွက်​ထဲမှာ​တော့ ​ရေ​ရောထားပြီး​သောက်​လက်​စ ။ ​ဆေးလိပ်​ပြာခွက်​ထဲမှာလဲ ​သောက်​လက်​စ မြန်​မာပြည်​ထွက်​နံမယ်​​ကျော်​ ​ဆေး​ပေါ့လိပ်​တိုက အခန့်​သား ။ ကို​မောင်​​လေးက​တော့ အမြည်းဖတ်​​လေးဝါးရင်း တီဗွီ စကရင်​​ပေါ်က ပုံရိပ်​ကို ​ငေးကြည့်​​နေတယ်​ ။ ( ဒီ​နေရာမှာ ​သေချာ ချန်​ပစ်​ခဲ့တာက ​ဆေး​ပေါ့လိပ်​နံမယ်​နဲ့ စား​နေတဲ့ အမြည်းအ​ကြောင်း – ဘာလို့ထားခဲ့ရသလဲဆို​တော့ ​နေရာ​ဒေ တစ်​ခုနဲ့ တစ်​ခု နံမယ်​ကြီးတဲ့ ​ဆေး​ပေါ့လိပ်​ တံဆိပ်​​တွေမတူကြဘူး ။ အမြည်းကြ​တော့လဲ တစ်​​ယောက်​နဲ့ တစ်​​ယောက်​ အကြိုက်​မတူပြန်​ဘူး ။ အဲ့​တော့ စာ​ရေးသူက နံမယ်​​တွေထည့်​​ရေးလိုက်​ရင်​ စာဖတ်​သူကို ​ဘောင်​ခတ်​လိုက်​သလို ဖြစ်​သွားမှာစိုးလို့ပါ ။ ​နောက်​ တီဗွီ စကရင်​​ပေါ်ကပုံရိပ်​​တွေ ဘာ​တွေဆိုတာ လွတ်​လပ်​စွာ ​တွေးထင်​နိုင်​​အောင်​ ကွက်​လပ်​ထားခဲ့ပါတယ်​ )
အဲ့ ​နောက်​ ကို​မောင်​​မောင်​​လေးအ​ကြောင်းနဲနဲ ​ပြောချင်​​သေးတယ်​ ။ ဒါမှ ​ရှေ့ဆက်​ဖတ်​မိတဲ့ သူ​တွေတွက်​ သိပ်​စဉ်းစားဖို့မလို​အောင်​ပါ ။ သူ့မှာက မိဘ​တွေမရှိ​တော့ဘူး ။ တစ်​​ယောက်​ထဲသမား ။ ရှင်းရှင်း​ပြောရရင်​ အသက်​က ​လေးဆယ်​​ကျော်​ လူပျိုကြီး​တော့ မဟုတ်​ရှာဘူး ။ သူ့မိဘ​တွေရှိစဉ်​တုန်းက မိန်းက​လေး တစ်​​ယောက်​နဲ့ လက်​ဆက်​​ပေးတာခံ ခဲ့ရဖူးတယ်​ ။ ​နောက်​ အ​ကြောင်းမတိုက်​ဆိုင်​တာနဲ့ က​လေးတစ်​​ယောက်​ရ အပြီးမှာ မျက်​ရည်​မသုတ်​ပဲ လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်​ ။ ခုဆို ကို​မောင်​​မောင်​​လေးရဲ့ သမီး​လေး​တောင်​ ဆယ်​နှစ်​​ကျော်​ပြီ ။ သားအဖ​ပေမဲ့ အ​နေ​ဝေး​တော့ သမီးက ဖ​အေကိုသိပ်​မခင်​တွယ်​ဘူး ။ မိဘ​တွေ မရှိတဲ့​နောက်​ ကို​မောင်​​မောင်​​လေး တစ်​​ယောက်​ သမီးနဲ့ အတူ​နေဖို့ ကြိုးစား​သေးတယ်​ ။ မ​အောင်​မြင်​ဘူး ။ အဲ့ဒိ​တော့ သူ့ခမြာ ​မေတ္တာငတ်​​နေရှာတယ်​ ။ သမီးအရွယ်​​တွေဆိုရင်​ ​မေတ္တာ သက်​၀င်​ပြီး လိုအပ်​တာ ကူညီ​လေ့ရှိတယ်​ ။ ​မေတ္တာ သက်​၀င်​တယ်​လို့ သုံးထားတာ​နော်​ ။ သူ့သမီးနဲ့ အဆင်​မ​ပြေ​တော့ ဖခင်​စိတ်​ နဲ့ သမီးအရွယ်​​လေး​တွေ ကို ကူညီ​နေရှာတာပါ ။ အဲ့ထိထက်​မပို​လောက်​ပါဘူး ။ ပိုတယ်​ဆိုရင်​လည်း သူ့စိတ်​ထဲ ၀င်​ပူးကြည့်​လို့ရတာမှမဟုတ်​တာ ။ ဘယ်​သိနိုင်​မလဲ​နော့ ။
အရက်​​လေး တစ်​ငုံ​သောက်​လိုက်​ အမြည်းဖတ်​​လေး​ကောက်​ဝါးလိုက်​ တီဗွီ စကရင်​ကိုကြည့်​လိုက်​နဲ့ ဇိမ်​ယူ​နေတုန်းခဏ လမ်း​ပေါ်က ဆူဆူညံညံ အသံ ကြားတာနဲ့ အိမ်​တံခါးအနီး မှာ အသင့်​​ဆောင်​ထားတဲ့ ​လောက်​​လေးခွနဲ့ ​လောက်​စာ​လေးငါးလုံး​လောက်​ ဆွဲပြီး အိမ်​အပြင်​ထွက်​လာခဲ့တယ်​ ။ ခုမှ သူသတိထားလိုက်​မိတာက မိုးက ပိုသည်းလာ​နေပြီး ​လေကလည်း ​တော်​​တော်​ထန်​​နေတာပဲ ။ ကြား​နေရတဲ့အသံ​တွေက ခါတိုင်းလို ရန်​ဖြစ်​သံ ​ခွေး​ဟောင်​သံ​တွေ မဟုတ်​ဘူး ။ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ရဲ့ ရန်​​တွေ့သံ​တောင်းပန်းသံ​တွေပါကြားလာရတယ်​ ။ ဘာ​တွေရန်​​တွေ့​နေတယ်​ ။ ဘာကို​တောင်းပန်​​နေတယ် မိုးသံ​လေသံနဲ့ မသဲကွဲဘူး ။ ဒါနဲ့ ခြံဝင်းနံရံ ကို ​လောက်​​လေးနဲ့ လှမ်းပစ်​လိုက်​ပြီး
” ဘယ်​သူ​တွေလဲကွ ဒီနားလာဆူ​နေတာ ! “
ခပ်​ဆတ်​ဆတ်​​မေးလိုက်​သံရဲ့ အဆုံး သုံး​လေး​ယောက်​​လောက်​ ထွက်​​ပြေးသွားတဲ့ အသံကြားလိုက်​ရတယ်​ ။ ​ပြေးသံ ခပ်​လှမ်းလှမ်း ​ရောက်​သွားမှ ဆဲဆိုသံနဲ့ အတူ ခဲ တစ်​လုံး ၀င်းနံရံကိုလာမှန်​တယ်​ ။ ဘယ်​ရမလဲ ? ကို​မောင်​​မောင်​​လေးပဲ ။ ခဲလာတဲ့ ဖက်​ကို ​လောက်​​လေးနဲ့ လှမ်းပစ်​လိုက်​ပြီး ၀င်းတံခါး​ပေါက်​နားက ပြန်​အလှည့်​
” ဟို ဦး​လေးကြီး အဲ့ အကိုကြီး ညီမကို ကူညီပါ “
ဟိုက်​​ရော ။ ​စော​စောက အကုန်​ထွက်​သွားတယ်​ ထင်​​နေတာ ဒီမှာ တစ်​​ယောက်​ကျန်​​နေ​သေးပါ​ရော ။ ဒါနဲ့ ကို​မောင်​​မောင်​​လေးက ခြံတံခါးနား အသာကပ်​သွားပြီး
” ဘာကူညီရမှာလဲ မိန်းက​လေး ​စော​စော အဖွဲ့နဲ့ မင်းနဲ့ ပြဿနာဖြစ်​​နေတာလား “
” ဟုတ်​ ……. ဟို ညီမကို ဒီမှာ တစ်​ည​လောက်​ နားခွင့်​​တောင်းချင်​လို့ပါ ။ မိုး​တွေ​လေ​တွေနဲ့ ဒီည မြို့ထဲပြန်​ရင်​လဲ ခုနက လူ​တွေနဲ့ ပြန်​​တွေ့​နေမှာစိုးတယ်​ ။ တစ်​ခြားသွားဖို့လဲ ကားရဖို့မ​သေချာဘူး ။ ခု​တောင်​ တစ်​ကိုယ်​လုံ မိုးမိပြီး ချမ်း​နေပီ “
လမ်းမီးတိုင်​ အလင်း​အောက်​မှာ မိန်းက​လေး တစ်​​ယောက်​ ရပ်​​နေတာ​တွေ့လိုက်​ရပြီး အိတ်​တစ်​လုံးကို ​ဘေးမှာချထားတယ်​ ။ ​သေ​သေချာချာသဲသဲကွဲကွဲ မမြင်​ရ​ပေမဲ့ ဒီမြို့ထဲက မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​ပုံမရဘူး ။ ဒါ​ပေမဲ့
” မဖြစ်​ဘူး ထင်​တယ်​ မိန်းက​လေးရဲ့ ။ အိမ်​ထဲမှာ ငါတစ်​​ယောက်​ထဲ ရှိတာ ။ ပြီး​တော့ အခု ငါ အရက်​​သောက်​ထား​သေးတယ်​ ။ “
ဟုတ်​တယ်​​လေ ။ ဘယ်​က​ရောက်​လာတဲ့ သူမှန်းမသိဘဲနဲ့ ခြံတံခါးအရမ်းဖွင့်​မ​ပေးပါဘူး ။ ​ကြောက်​လို့​တော့မဟုတ်​ဘူး ။ လက်​ရှိ မြန်​မာနိုင်​ငံရဲ့ ဥပ​ဒေ အရ အရက်​​သောက်​ထားတဲ့ အချိန်​ မိန်းက​လေး​တွေနဲ့ ​ရှောင်​နိုင်​ရင်​အ​ကောင်းဆုံးမဟုတ်​လား ။ ပြီး​တော့ သူ​ပြောလိုက်​တဲ့ စကားမှာလဲ အမှန်​​တွေချည့်​ပဲ ။ ဒါ​ပေမဲ့ ရွာကျ​နေတဲ့ မိုး​ရေ ​အောက်​မှာ ​သောက်​ထားတဲ့ အရက်​ဓာတ်​​ပျောက်​ပြီး သူကိုယ်​တိုင်​​တောင်​ နဲနဲချမ်းစိမ့်​စိမ့်​ဖြစ်​လာပီ ။ သာမာန်​​နေတဲ့ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​အတွက်​ ဘယ်​​လောက်​ ချမ်းရှာမလဲ ။ ကိုယ်​ချင်းစာပါတယ်​ ။ ဒါ​ပေမဲ့ မမူး​သေးတဲ့ အရက်​သမားတစ်​​ယောက်​ရဲ့ ဆင်​ခြင်​တုံ့တရား သူမှာအပြည့်​ရှိ​သေးတယ်​ ။ ဒါ​ကြောင့်​ ငြင်းလိုက်​တယ်​ ။ သူ့မှာ ငြင်းနိုင်​တဲ့ အခွင့်​အ​ရေးလည်းရှိတယ်​ ။ ဒါ​ပေမဲ့
ငြင်းလိုက်​မိတာ မှားသွားလား ။ လူသားချင်းမစာနာရာ​ရောက်​သွားမလား ။ အ​တွေး​တွေက ​ယောက်​ယက်​ခတ်​သွားတယ်​ ။ ​
့​စော​စောက ပစ်​လားခတ်​လားနဲ့ ​ဇောရှိ​နေလို့ ​သွေးပူ​နေ​ပေမဲ့ ခု​တော့မိုးနဲ့​လေနဲ့ ကြားထဲ ​နေရထိုင်​ရအဆင်​မ​ပြေချင်​ဘူး ။ သိတယ်​မဟုတ်​လား ။ ကို​မောင်​​မောင်​​လေး အသက်​က ​လေးဆယ်​​ကျော်​လာပြီ​လေ ။ ခြံဝင်းအပြင်​မှာ ရပ်​​နေတဲ့ ​ကောင်​မ​လေးက​တော့ ​တော်​​တော်​ငယ်​ဦးမယ်​နဲ့တူရဲ့ ။ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်​ရ​တော့ အသက်​ကို ခန့်​မှန်းဖို့မလွယ်​ဘူး ဆို​ပေမဲ့ အသံ​နေအသံထား အရ​တော့ အသက်​သုံးဆယ်​ပြည့်​ဖို့ ​တော်​​တော်​လိုဦးမှာပဲလို့ ကို​မောင်​​မောင်​​လေး ​တွေးလိုက်​တယ်​ ။
” ကဲပါ အကိုကြီးရယ်​ ….. ဒီတစ်​ည​တော့ နားပါရ​စေ ။ တစ်​ညလုံး မဟုတ်​ရင်​ မိုးတိတ်​သွားတဲ့အချိန်​ ပြန်​သွားဆိုလဲ ပြန်​ပါ့မယ်​ ။ ဒီမှာမိုးစက်​​တွေကြားထဲ ​တော်​​တော်​​အေး​နေပြီ​နော်​ ။ ဒီခြံ​ရှေ့ ညီမ ​သေသွားရင်​ အကိုကြီးရှင်းရမှာ​နော်​ ။ ဆိုင်​ဆိုင်​မဆိုင်​ဆိုင်​ သက်​ဆိုင်​ရာက​တော့​ခေါ်​မေးမှာသိလား “
​ကောင်​မ​လေးက သူမရဲ့ ​နောက်​ဆုံးလက်​နက်​ကို ထုတ်​သုံးလိုက်​တယ်​ ။ ဟုတ်​တယ်​ ကိုယ့်​ခြံဝင်းနဲ့ အနီးတစ်​၀ိုက်​လူ​သေမှု ဖြစ်​ရင်​ အနဲဆုံး ​ခေါ်အ​မေးခံရမှာအ​သေအချာပဲ ။ ဥပ​ဒေ က ဒီလို ရှိတာကိုး …… ။ ဒါ​ပေမဲ့ ကို​မောင်​​မောင်​​လေး ​ကြက်​သီးထ သွားတာက သူ့ကို အ​မေးခံရမှာကိုမဟုတ်​ဘူး ။ သူ့ခြံ​ရှေ့မှာ ​သေသွားရင်​ ဆိုတဲ့ စကား ခင်​ဗျား တို့အလိုအတိုင်း​ပြောရရင်​​တော့ ‘ဟတ်​ထိ’ သွားတယ်​​ပေါ့ ။ သနားလည်း သနားသွားတယ်​ ။ ဒါ​ကြောင့်​ ​နောက်​ဟာ ​နောက်​ရှင်းဆိုပြီးခါးကြားက ​သော့ကိုယူပြီး ​သော့ဖွင့်​​ပေးလိုက်​​တော့တယ်​ ။
​နောက်​ဒုတိယပိုင်း ဆက်​လက်​ရှုစားပါ ​ပေါ့ဗျာ ။ ဇာတ်​သိမ်းမလား မသိမ်း​သေးဘူးလား​တော့ အာမ မခံနိုင်​ဘူး​နော်​ ။
” မဖြစ်​ဘူး ထင်​တယ်​ မိန်းက​လေးရဲ့ ။ အိမ်​ထဲမှာ ငါတစ်​​ယောက်​ထဲ ရှိတာ ။ ပြီး​တော့ အခု ငါ အရက်​​သောက်​ထား​သေးတယ်​ ။ ”
” ကဲပါ အကိုကြီးရယ်​ ….. ဒီတစ်​ည​တော့ နားပါရ​စေ ။ တစ်​ညလုံး မဟုတ်​ရင်​ မိုးတိတ်​သွားတဲ့အချိန်​ ပြန်​သွားဆိုလဲ ပြန်​ပါ့မယ်​ ။ ဒီမှာမိုးစက်​​တွေကြားထဲ ​တော်​​တော်​​အေး​နေပြီ​နော်​ ။
ကိုေ နကြီး ကျုပ် သိနေတယ်နော်
ဆြာနီ ဟို ဂရုထဲ မလာဘူးမှတ်တာ ဒီမှာ ကယ်တင်ရှင်ဖစ်နေတာလား??
အချစ်မှာ စောတယ် နောက်ကျတယ် ကြီး
တယ် ငယ်တယ် မိုးရွာတယ် နေပူတယ် မရှိပါဘူး
မတော်တဆနဲ့ မျက်စိလည်လမ်းမှား တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကို တွေ့တတ်ပါတယ်
မိုးစဲသွားရင် အကိုကြီးအိမ်က ရှိတာလေးတွေ ပြောင်သွားပြီသာမှတ်….
ဇာတ်​လမ်းထွင်​ပြီး ဘတ်​သွားရင်​ ကုန်​​တော့မှာပဲ။
ပိတ်သတ်ကြီး ထင်တာ အင်မတန် ရိုးစင်းကြောင်း ကို
မထင်တာတွေ ရေးပြီး ဇာတ်သိမ်းပြလိုက် စမ်းပါ အဘနီ ရာ။
တစ်ည တည်း ခ သိန်းတစ်ရာ တန် ချက်လက်မှတ်ကြီးဘဲ ရေးပေးသွားသွား
စိန်ထုတ် ကြီး ဘဲ ချန်ပေး သွားသွား။
အပေါ်မှာ ရှိသမျှ ဇာတ်သိမ်းပုံ အကုန်နီးပါး စုံပြီ
အဲ့တော့ အဘနီ ဘယ်လိုသိမ်းမလဲ